४ प्रश्न | मझेरी डट कम
म स्न्तुष्ट प्राणी हुँ ।
जिन्दगीमा केही असहजता त होलान् नि
सबै कुरा सकारात्मक छन् मेरा लागि
तिम्रो जिन्दगी त कठिन देखिरहेको छु नि ?
तिमीलाई त्यस्तो लाग्ला । तर मलाई सहज छ । जिन्दगी जस्ले जस्तो देख्छ उसले अरुलाई पनि त्यस्तै देख्छ । यस्तो भ्रमित कुरा मसँग नगर । हीलोमा पनि फुल फुलाउन सक्छु म । शील आचरण अलि शिष्टता, सदाचरण गरी सोध ।
दुषित राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
तिम्रो कुरा मिलेन, राजनीति कहिल्यै दुषित हुँदैन । यो प्रश्न सच्याउ म फेरि तिमीसँग कुरा गरुँला । पहिलो अङ्ग भनेको राजनीति नै हो । यसलाई सत्यको खोजक भएर प्रयोग गर कहिल्यै यसको विष हुँदैन ।
वषौँपछि तपाईंलाई भेटेको छु , अखवारकालागि केही सामग्री त चाहिन्छचाहिन्छ तपाईंबाट ।
त के मेरो नाउँबाट पत्रिका विकाउने बिचार छ ?
हजुरको शिक्षा पाठकको मनमष्तिष्कमा पु¥याउने सहयोग गर्न आएको हुँ ।
ल सुरु गररुँ त । देश र जनताका थुप्रै कामहरु छन् । सानो कुराले देश र जनतालाई धेरै असर पर्न सक्छ त्यसको बिचार पु¥याई मसँग जिज्ञासा फुकाउनु होला । जम्मा ४ प्रश्न जस्ट ४ प्रश्न मात्र सोध्नुहोला । म प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्नेछु ।
१) हजुर कहाँ जन्मनु भयो ?
म जन्मेको सुदुर पश्चिमको खप्तडबाबा धाम पहाडमा हो । यसको पनि मरो परिवारसँग द्वन्द्व छ । मेरो बाउ ज्योतिषिमा विश्वास गर्ने अनि मरो मुख हेरेमा उसको टाउको खान्छ भनेर मलाई बाबाधाम कर्णलाई जस्तै बनाए । बाउ धेरै विलासी ! जब म बाबा धाममा पुरै निर्वस्त्र भएर बाबासँग पुरै व्रम्हाण्ड बारे शिक्षा लिइरहेको थिएँ त्यसैबेला विलासी बाउ पनि खप्तड बाबालाई दर्शन गरि फक्र्यो ।
त्सैबेला फेरि माओवादीको बीजारापण भयो । बाउले विदेशका ठुला ठुला टेबलमा चेस चेस गरी प्याला जुधाइरहँदा म भने नेपालभाषा साहित्य दबुःमा जुजु बाँला जनता द्ययाँला (राजा धेरै ह्याण्डसम, जनतालाई सधै भोको तन )भन्ने मन छुने मार्मिक गीत गाएर भाव विह्वल भइरहेको थिएँ । यसरी गरीबको बस्तीबस्तीमा मेरो जन्म भएको हो ।
२) बाल्यकाल कसरी विताउनु भो ?
बाल्यकाल सधैँ अहिलेको फन पार्क भकुटीमण्डपमा हरेक खेल खेल्न गएँ । राजादेखि झुपडीका बच्चाहरुसँग कार चलाउने, बन्दुक ताक्ने, डुङ्गा खियाउने, प्यारासुटबाट हम फाल्ने, रोटे पिङ खेल्ने, सेभेन स्टोन, टेबल टेनिस, गुच्चा, आसपास, दण्डिवियो, कपर्दी, फुटबल, ह्वाग्रा, चेकर, चेस, घ्वाँइ, नाटक गर्ने, चङ्गा उडाउने, साइकल चलाउने, क्याराम बोर्ड खेल्ने, रिङ्ग खेल्ने, गणित दौड खेल्ने, विस्कुट झण्ड्याएर खाने, आदि थुप्रै खेलहरु खेल्र्यौ । सबैसँग हिमचिम बढाउँदै गएँ । त्यो बेला पनि एउटा पछुतो थियो म मा । त्यत्तिबेला मरो मन मष्तिष्क यस्तै खेलहरुले विकास भएर होला पढाइमा अब्बल नै थिएँ । मरो सर्टिफिकेट जस्ले हेथ्र्यो उसलाई मैले पढाउने मौका पाउँथे । यहि पढाउने सिलसिलामा थुप्रै म उमेरका बालकहरुलाई मैले फनको अर्थ बताउन नसकेको मा पछुतो भयो । अहिलसम्म पनि यो पछुतोले पोलिरहेको छ ।
२) देशलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
देश कसैकोे पेवा होइन । कसैको विर्ता होइन । देश न्यायको हो । जब सबै जनतालाई न्याय हुन्छ अनि मात्र देश शेष हुन्छ । कसैले जमिनदारी गरेजस्तो देश होइन । अहिले देश निषेश अवस्थामा छ । हो यस अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्नु आवश्यक छ । पानीको खानी छ हाम्रो देशमा । त्यसलाई आलीआलीबाट निकास दिएर सबैका गरागराहरु पोटिलो बनाउनु अपरिहार्य भएको छ । म ठोकुवा गर्छु देशमा १२रै महिना बाढि आउने छैन । आफु उन्मत्त भै मदिरा डकार्ने अनि जनतालाई दुध खाएमा स्वस्थ्य हन्छ भनेर केही पार लाग्दैन । राम्रो काम गरुँ भन्नेहरु अहिले पनि धरापमा छन् । मैले पहिले पनि भनि सकेको छु यस्ता हुँडरीको पञ्जाबाट देशलाई छुटाएर देशलाई शेषमा अर्थात अस्त्विमा राख्न्ु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
३) साथीहरु को को छन् तपाईंका ?
मरा लागि उत्पीडित सबै साथी हुन् । मैले थुप्रैलाई उत्पीडनबाट पार लगाएँ । जब उनीहरु उत्पीडनबाट पार पाउँछन् उनी मरा दुश्मन बन्छन् । यसैलाई मैले विचलन भन्ने गरेको छु । सादा जीवन जिउने गरेकाले थुप्रैको हेपाइर खप्की आएको छु । बुद्धले जस्तो विषालु च्याउको सामना अझै गरिरहेको छु । मैले सुचना प्रविधिको तालिम वीस वर्षजति लिएको छु । यसैको सहारामा विश्वका थुपै्र राजनेताहरुसँग भई पनि रहेको छ । जति गणतनत्र अगाडि सुपर पावरका साथ राज गरेको छु अहिले पनि सर्वसाधारण बनिरहँदा ठुलाठुला निर्णयहरु यसै सुचना प्रविधिको माध्यमबाट भइरहेको छ । धरैभन्दा धरै सम्बेदनशील भई धरै तौलीकन शब्द प्रयोग गरिरहेको छु । देश जनता सुधार्न जत्तिसुकै ठुलो छलाङ्ग लगाउन तयार छु । साथीहरुलाई, जनताहरुलाई र तपाईंहरुलाई पनि मरो यही सन्देश हो ।
४) के पढ्नुहुन्छ , अरुलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
खोला पढ्छु समय थाहा हुनछ , हावा पढ्छु , घाम पढ्छु सबैलाई अत्यावश्यक कुरा समान वितरण सम्झन्छु । चरा पड्छु सङ्गीतको उच्च मुल्याङ्कन गर्छु । गहन अध्ययन गर्छु । बादल हेर्छु सबै कुराको समाधान त्यहीँ पाउँछु । आजकाल ठेलीकाठेली पुस्तकहरु साउण्डमा कम्प्युटरमा इन्टरनेटमा सेभ गरेको छु । सायद यो जीवन यी सबै अध्ययन गर्न पर्याप्त छैन तसर्थ सत्यसँग नजिकका बस्त्ुहरु केलाउँछु । व्रह्माण्डका अलौकिक ताकतहरसँग साक्षत्कार भइरहेको छु । कत्ति म यस जीवनबाट मृत भनी काजकृया भइसकेकाहरु पनि प्रत्यक्ष भेटिसकेको छु । उहाँहरुबाट यीमाथिका पुस्तकका ज्ञानभन्दा धरै ठुलो ज्ञान पाइरहेको छु । हाम्रो पृथ्वीको समस्याभन्दा माथिका कुरालाई समाधान गर्ने बाटो खोजेमा धरै अलौकिक शक्तिहरु आउँदो रहेछ तर त्यसलाई दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा म सधैँ सचेत र सजग भइरहेको छु । विलखबन्दमा परेकाहरुलाई सघाउन म भरमग्दुर प्रयासरत रहिरहेको छु र रहिरहनेछु पनि । हामीले परमात्मा देउता भनेका पनि उही असल काम सर्वत्र गर्नेलाई नै भनेका हौँ तराजुमा तौलेमा यो स्पष्ट थाहा हुन्छ । उहाँहरुलाई सघाउने हरदम म डटिरहेको छु । हरेक बाधाहरुसँग जुध्न मलाई उहाँहरुले नै सिकाउनु भएको हो ।
भौतिक कुरामा मैले ठुलाठुला पुस्तकालयका लागि पुस्तकहर सङ्कलन गरेँ सबैलाई लाभान्वित गराएँ । आफुले गरेका कुरा लागु गराउन सहपाठी सबैलाई कठिन भइरह्यो । यही असन्तुष्टता हटाउन पुस्तकहरु आफ्नो कोठामा भरिभराउ गरेँ । तर यस संसारमा गर्न नसकिने काम केही रहेनछ त्यस कुरालाई कुन बाटोबाट लाने भन्ने त्यसमा सपष्ट र सत्यसँग नजिक हुनु अपरिहाय छ । सत्यसँग जति साक्षत्कार भयो त्यसबाट त्यत्तिक्कै उर्जा प्राप्त हुन्छ । जहाँ धरै सम्पत्ति फिरिमा पाइन्छ भने पनि नलिने म प्राँणी जो हुँ । मेहनाताना मेरो पारिश्रमिक हो । पारितोषिक हो । गलत सँगत नहोस् यसमा धरै सजग छु म । उर्जालाई सकारात्मकमा प्रयोग गरेमा आफँमा उर्जा रहिरहन्छ र यसबाट लाभान्वित गराउन सकिन्छ नत्र त्यो रहन्न र अरु आफु क्षिण हुनुपर्ने हुन्छ ।
उच्च् तथा कठीन अध्ययनको सिलसिलामा एक किसिमको उर्जा पाई त्यसैको बलले एक पटक मुखबाट फुकेमा र्तैले जहाा पनि आगो लाउन सक्छस् भन्ने सन्देश पाएँ । होइनहोला भनी प्रयागे गर िहेरेँ । साँच्चि त्यस्तै भयो । अहिले सम्म पनि त्यस नोक्सानप्रति खेद प्रकट तथा गल्ती महसुस भइरहेको छ । हे भगवान ! मेरो मनमा त्यस्तो कुनै नराम्रो विचार नल्याइदिनु होला जसले कसैको नोक्सान होओस् सधैँ राम्रो विचार आइरहुन् त्यसै शक्तिले सबैको भलो होउन् ।
२०७६ साउन २४ राति १२ बजे
ककतजन मार्ग, कुलेश्वर
लक्ष्मीमा समर्पित कलमको क्रन्दन